भिडियो समाचार : मंसिर १५ र २४ गते यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली, मौन अवधिमा बम विस्फोट | Ratopati
भिडियो समाचार : मंसिर १५ र २४ गते यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली, मौन अवधिमा बम विस्फोट
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर १२, २०७६ chat_bubble_outline0
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छ ।
महाराजगन्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा गत मंगलबार एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको अस्पतालले जनाएको छ ।
बिहीबार अस्पतालका चिकित्सक अरुण सायमीले प्रधानमन्त्री ओली सामान्य हिँड्न र खाना खान सक्ने भएको जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै सघन उपचार कक्षमा नै राखिएको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बिहीबार बिहानै ट्वीटर ह्याण्डलमार्फत आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा चिकित्सकहरु अरुण सायमी, रमेशसिंह भण्डारी, दिव्या सिंहलगायतको टिम रहेको छ ।
१३ औं सागको तयारी
सरकारले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले बिहीबार काठमाडौंमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सागको व्यवस्थापन र खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी सबै तयारी पूरा भएको बताए । त्यस्तै मंसिर १५ गते आइतबार साँझ ५ बजे सागको भव्य समुद्घाटन दशरथ रंगशालामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने मन्त्री विश्वकर्माले जानकारी दिए । समुद्घाटन कार्यक्रममा देश विदेशबाट विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागिता रहने समेत उनले बताए ।
साग समुद्घाटनमा कलाकारहरुले नेपाली कला संस्कृति झल्कने खालका प्रस्तुतिहरु प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत उनले बताए ।
दिनभरका मुख्य कभरेज
विश्वमा वार्षिक ५० अर्ब टन बालुवाको माग, कहिलेसम्म धान्न सक्ला ?
संविधान संशोधनको कुरा अब प्रम केपी शर्मा ओलीको निगाहको विषय हो
समयमै काम नगर्ने ठेकेदार र एक्सन लिन नसक्ने सरकार
७३ वर्षीय सांसद कर्ण सिंहदरबारमै सिक्दैछन् कम्प्युटर
साग भलिबलः दोस्रो खेलमा नेपाल भारतसँग पराजित
फौजदारी अभियोगमा मुछिएका मेजर शाही फेरि बने प्रधानमन्त्रीको एडीसी
शरद पवारले कसरी अमित शाहको रणनीतिलाई विफल तुल्याए ?
त्यसैगरी सागको बेला २ दिन उपत्यकामा सञ्चालन हुने यातायातमा जोर विजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालका अनुसार सागको उद्घाटन र सम्पन्न हुने दिन मंसिर १५ र २४गते दुई दिन जोर–विजोर प्रणाली लागू गरिने भएको हो ।
मंसिर १५ गते विजोर नम्बर र २४ गते जोर नम्बरका सवारी साधन चल्ने महाशाखाले जनाएको छ । यो नियम काठमााडौं उपत्यकाको रिङ रोडभित्र लागू हुने एसएसपी ढकालले बताए ।
त्यस्तै भिभीआइपी र खेलसँग आवद्ध र सञ्चारमाध्यमका सवारी साधनलाई भने जोरविजोर प्रणाली लागू नहुने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । खेल अवधिमा सञ्चारमाध्यमका सवारी साधनको पार्किङ स्थान छुट्टै स्थानमा तोकिनेछ ।
त्यसैगरी, साग सुरक्षा उपसमितिले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । सोही अवसरमा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले विदेशी पाहुना र साग आयोजनाको मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको सुरक्षा ब्यवस्थालाई सहज रुपमा सम्पन्न गरिने बताए ।
यता सागको आइतबार हुने उद्घाटन भव्य बनाउन विशेष तयारी थालिएको छ । राजधानीको दशरथ रंगशालामा सागको औपचारिक उद्घाटन हुनेछ । त्यसका बिहीबार रंगशालामा ‘रिहर्सल’ गरिएको छ । नेपाली सेना, प्रहरी तथा विद्यार्थीले ‘रिहर्सल’ गरेका हुन् ।
सागमा विशेषगरी फुटबल, क्रिकेट, भलिबल र बास्केटबल खेलमा दर्शक शुल्क राखिएको र दर्शकले ई–सेवा मार्फत टिकट किन्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
मौन अवधिमा बम विस्फोट
उपनिर्वाचनको मौन अवधिकै समयमा एक उम्मेदवारको घरमा बम विस्फोट भएको छ । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका नेकपा उम्मेदवारको घरमा बम विस्फोट भएको हो । नेकपाका उम्मेदवार बिक्रम चौधरीको घर नजिकै बम विस्फोट भएको हो ।
विस्फोटबाट चौधरीको घरको कम्पाउण्डको पर्खाल र शौचालयमा क्षति पुगेको छ । प्रहरीले विस्फोट भएको प्रेसर कुकर बम रहेको बताएको छ । मंसिर १४ गते सो गाउँपालिकामा उपनिर्वाचन हुँदैछ भने मौन अवधिको समयमा भएको विस्फोटले स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ । घटनामा मानवीय क्षति भने भएको छैन ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकका दुई निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । बिहीबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पछिल्लो पटक गरेका २ निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।
समाचार भिडियो हेर्नुहाेस्
जसमा नेपाल भारत पारबहन सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी सहसचिव स्तरीय बैठकका लागि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी भुमीसम्बन्धी एकिकृत विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ ।
निर्णय सार्वजनिक हुनु अगावै सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी बैठक बसिसकेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साना व्यवसाय तथा उद्यम गर्नका लागि पूँजीको अभाव हुन नदिने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि पूँजीको अभाव हुन नदिने नीति लिएको बताए ।
साना तथा घरेलु उद्योगको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि पूँजी अभाव हुन नहुने उनले बताए । उनले बैंकहरु मार्फत सरकारले ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने सहुलियत ऋणको उपयोग गर्नपनि हस्तकला व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले हस्तकला व्यवसायको विकासका लागि आधुनिक प्रविधि र सिप विकासमा सघाउ पु¥याउनुपर्ने बताए ।
आइएमईको विजेता घोषित
बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएको आइएमईले दशैंका अवसरमा ल्याएको ‘दशैंमा डबलको डबलको डबल’ अफरको बम्पर बिजेता सप्तरीका विरेन्द्र खङ्खत्वे बनेका छन् ।
आइएमईले काठमाडौंमा बिहीबार एक कार्यक्रम गरी लक्कि ड्र मार्फत बिजेता घोषणा गरेको हो । बिजेता खङ्खत्वेले आइएमई मार्फत ५९ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ पठाएका थिए । उनले बम्पर अफर मार्फत पठाएको रकमको आठ गुणा ४ लाख ७७ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ जितेका छन् ।
कार्यक्रममा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइएईले ल्याएको यस्तो योजनाले विदेशमा बसेर कमाएको रकमलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत देशमा भित्र्याउन सहयोग पुगेको बताए ।
आइएमईले गत भदौ १५ गते देखि कात्तिक मसान्त सम्मका लागि उक्त अफर सार्वजनिक गरेको थियो ।
साताकाे हिट समाचार
अष्ट्रेलियामा नेपाली युवतीद्वारा श्रीमानको हत्या
देशमा संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको बेला धक्का दिएर आफ्नो पार्टीको मान्यता स्थापित गरौंः कमल थापा
भारत ओलीसँग मिलेर राजतन्त्र र हिन्दुराज्य व्युताउन चाहन्छ : उपेन्द्र यादव
आजका हेडलाइन्स : ८ असार २०७८
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्धमा रिट दायर गर्ने र बहस गर्ने अधिवक्ताहरुको प्रतिक्रिया
लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा उभिन काँग्रेस सभापति देउवाको आव्हान
स्वेतपत्र जारी गर्न नेपाली काँग्रेसको माग